Sharraxa barnaamijka photoScape ee sawirrada - Hoyga Aqoonta
Sharraxa barnaamijka photoScape ee sawirrada
Waxaa la qoray : [ 21-05-2012 ]
Sharraxa barnamaijka PhotoScape.
Waa barnaamij ka fiican Photoshop oo ka dhib yar intuu doono!.
Sidaad ula socotaba ka shaqaynta sawirradu waa iska sahlantahay laakiin, waxay u baahantahay
inaad xiisayso iyo in kale.
Aynu bilowno sharraxa barnaamijkan oo aan maanta ka gudbay dejintiisa oo aad baratay hadda akhriste.
Barnaamijkani waa mid ah bilaash
Barnaamijka meelo meelo ayaa jirta aanan sharraxayn oo aan ka tagayo oo aan kuu ahayn muhim danna aadan ka yeelanaynine sidaa ula soco.
Haddaba kala soo dag halkan oo midabkan riix (Waana bogga rasmiga ah)
Haddaba sharrixii aynu bilowno oo aynu la soconno.
Sidaan horay u barannayba adiga oo sharraxa fiirsanaya ku shaqee barnaamijka oo mar walba adeegso (Ctrl+Del) ama hadduu kumbiyuutarkaagu yahay mid casri ah oo aad ka weydo Del (Ctrl iyo labo fallaarood oo kala jeeda ayaad ku arkaysaa meesha ay ku qorantahay Caps Lock korkeeda) marka adiga oo haya Ctrl riix Labadaas fallaarood.
Sawirka ayaan ku qoray sharraxa.
Sawirka guud marka barnaamijka la shido.
Ugu danbayntii tan ayaan ku sameeyey barnaamijkan balse, adigu waxaad ku noqon kartaa qof xariif ku'ahe dadaal samee mar walba.
Ogow wakhti badan baan ku bixiyey sharraxane, xataa haddii sharruxu ku qancin waayo fadlan ii soo sheeg wixii aad ku qanci weydo ee ha noqon akhriste aan ka hadlin ama ii sheegin meeshaan ka khaldamay. Mahadsanid.
Mowduucii hore : Sharraxa barnaamijka photoScape ee sawirrada -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Halyeyga Afrika
Jawaabta: Sharraxa barnaamijka photoScape ee sawirrada
Anigu markaan arkaan ka jawaabaye la soco Halyeyga Afrika waanad ku mahadsantahay barnaamijkan ku soo daaliyey.
mar walba golahan wax fiicna baa laga helaa mahadsanid sidaana noo xiise geli sxb
yaa salaam yaa salaam barnaamijkaan raadinayay waakanaa mahadsanid boqoliiba boqol
Mar walba halyey ahow saasaa la rabaa. Barnaamij qiimo leh ku mahadsanid.
anigu mahadsanid keliya madhahayoo waxaan ku darayaa qiimaynta u fiican.
ajar allaha kaasiiyo waa cashar wanaagsane vivahoyga aqoonta
Waa barnaamij loo baahnaa iyo sharrax ka sii fiican oo aan anigu gaar ahaan ku leeyahay Ku Mahadsanid
Mahadsanid Halyeyga Afrika horumar joogto ah
intaan arkayay websaaytyo soomaaliya kan ugu heerka sareeya waa kan waxaanan leeyahay oo idinkula talinayaa inaad sidaa ku wadaan oo aydaan howshaas iyada ah ka niyad jabin barnaamijkanina waa mid aan runtii anigu ka helay mahadsanidin dhallinyaro kheer alaha idin siiyo.
baahantahay, barnaamij, barnaamijka, bilowno, dhib, doono, fiican, gudbay, inaad, intuu, iska, kale, laakiin, photoscape, photoshop, sahlantahay, sawirradu, shaqynta, sharraxa, sidaad, socotaba, ula, waxay, xiisayso, yar
Sharraxa barnamaijka sawirrada yareeya Amiin Golaha Barnaamijyada sharraxan 11 26-07-2012 09:32 PM
Barnaamijka sawirrada yareeya Amiin Golaha Barnaamijyada 5 03-06-2012 12:35 AM
Sharraxa Barnaamijka ugu caansan sawirrada. Rooble Golaha Barnaamijyada sharraxan 8 10-09-2011 07:07 PM
Barnaamijka ugu caansan sawirrada. Rooble Golaha Barnaamijyada 1 06-04-2011 06:18 PM
Barnaamijka sameeya sawirrada soc-socda Rooble Golaha Barnaamijyada 0 24-03-2011 06:35 PM